Soo dejisan iTunes 12.5.1 – Vessoft
Soo dejisan iTunes
iTunes – ciyaaryahan oo taageero ka hawlaha ay u abaabulaan maktabadda files warbaahinta. software wuxuu bixiyaa .Wadashaqayntaas ee files warbaahinta iyo codsiyada kala duwan la aaladaha Apple. software The kuu ogolaanayaa inaad ciyaari files warbaahinta of qaabab badan iyo aragto warbaahinta Streaming video. iTunes ku jira dukaan dhisay-in in falgala shabakadda muusikada iyo u saamaxaaya in ay soo bixi files warbaahinta. iTunes falanqeeyaan faylasha maktabadda, oo korkoodana bixisaa jihada ama film-kiina muusikada ku salaysan la door user ee.
.Wadashaqayntaas Qalabka Apple
Daawashada of video Streaming ah
Helitaanka AppStore iyo iTunes dukaanka digital
iTunes Software la xiriira:
العربية, English, Українська, Français... SMPlayer 16.9
العربية, English, Українська, Français... 360 Total Security 8.8.0.1080
English, Español, Deutsch, 中文... DVD Decrypter 3.5.4